အတွေးအမြင်အယူအဆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » အတွေးအမြင်အယူအဆ
- lon don
Posted by lon don on Aug 2, 2012 in Ideas & Plans | 8 comments
ဤဖော်ပြချက်များသည် ကျွန်တော်၏ အတွေးအမြင် အယူအဆများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ယခုလို ဒီမိကရေစီ နိုင်ငံတော်တည်နေသောကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်၏ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော
မီဒီယာလောကသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍနေရာတွင် အရေးကြီးသော အရာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အရေးကြီး
သော နေရာတွင်ပါဝင်နေခြင်းကို အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ၊ မွန်မြတ်သော စေတနာတို့ဖြစ် နိုင်ငံတော်ကောင်းကျိုး၊ မြို့နယ်ကောင်းကျိုး၊ လူထုကောင်းကျိုးများကို စနစ်တကျ၊ နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ အသုံးချလုပ်ဆောင်လျှင် ကောင်းမည်ဟု ယုဆပါသည်။
အချို့သော ကလောင်သမား၊ မီဒီယာသမားများသည် မိမိမြို့ရွာအတွင်း အဖြစ်အပျက်များကို အင်တာ
နက်ဝက်ဆိုဒ်အသီးသီးတွင် တင်ပြနေခြင်းများမှာ မိမိ၏မြို့ရွာ၊ မိမိနိုင်ငံ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်နစ်နာတာတွေ
ရှိကြောင်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ထိခိုက်နစ်နာမှုများမရှိစေရန် သတင်း၊ မီဒီယာ၊ ကလောင်
သမားများသည် တိကျမှန်ကန်၊ ဖြောင့်မတ်သောသတင်းများရရှိပါက ရှေးဦးစွာ မိမိတို့မြို့ရွာ၊ တိုင်းဒေသကြီး
အတွင်းရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့အား တင်ပြတောင်းဆိုဆွေးနွေး
ရန်သင့်ပါသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တင်ပြတောင်းဆိုဆွေးနွေးခြင်းများကို သဟမျှတစွာ လုပ်ဆောင်ပေး
နိုင်ခြင်းမရှိမှသာ နိုင်ငံတော်၏စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော မီဒီယာသမားများ၏ကလောင်လက်နက်ဖြစ် နိုင်ငံ
အကျိုး၊ မြို့ရွာအကျိုး၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းတွေးမြင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်မှသာ နိုင်ငံကြီးသားပီသပြီး ကိုယ့်မြို့၊ ကိုယ့်ရွာ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်
လူမျိုး၏ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းရာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး မတရားအုပ်ချုပ်မှု၊ လာဘ်စားမှု၊ ဘက်လိုက်မှုများ
ပပျောက်ပြီးကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရဖြစ်အောင်အစိုးရနှင့်မီဒီယာများ၊ သတင်း သမားများ၊ ကလောင်ရှင်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း တွေးမြင်ယူဆရပါသည်။
About lon don
lon don has written5post in this Website..
View all posts by lon don →
တွေးမြင်ယူဆခြင်းမှသည် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် သွားရန်လမ်းကား ဝေးလွန်းနေပေ၏။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှစ်များစွာ ပိတ်လှောင်ခြင်းခံထားရသော သတင်းကလောင်ငှက်တို့သည်
ယခုအစ ရချိန်အဖန်အတွင်း ပြင်းစွာသော ဆန္ဒဖြင့် လက်ကမြင်းကျသည်က တစ်ကြောင်း………
အနှီထိုသူတို့အား ထိန်းသိမ်း ဖျောင်းဖျလမ်းသင့်ကြကုန်သော ကဝိကျော်မော်တို့သည်ကားလည်း
ငြင်းဆံမရနိူင်သော မရဏတည်းဟူသည့် သေမင်းခေါ်ဆောင်ရာ လမ်းဆီသို့ လိုက်ပါကုန်ကြသည်
မှာလည်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်ချေတမုန့် …… ဆက်လုပ်… ဆက်လုပ်…… ဒန့် တန့် ဂွမ်း တော့မည်။
Media များကိုလွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့် ပြောခွင့် မရသေးပါက” ရြွှေ့ပည်တော်ကြီး မျှော်တိုင်းဝေးနေဦးမည်” ဖြစ်ပါသည်….
ဖြစ်ပုံအတိုင်း အတိအကျ တင်ပြသည်ကို
နင့်ကို ငါအတတ်ဟောလိုက်မင် အသင်သည်ကား စစ်တပ်ဘောမလိုသူ သို့တည်းမဟုတ် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ အနှောက်ယအယှက်ပေးလိုသူ စစ်ကျွန်စော်နံရသည်ကို ရှယ်အယ်နံပါတ်ဖိုက်ရေးမွှေးနံ့ထင်နေသူတည်း။ အသင့်အား အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီးမှ သေးနှင့်ပန်းရန် အမှောင်ထုထဲမှ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေပေသတည်း။။။
စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ဆိုတာ လူကြားကောင်းအောင် သတ်မှတ်ပေးထားတာများလားမသိဘူး … ။
သတင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာ ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာတွေက အခုထိ မပျောက်ပြယ်နိုင်သေးတာကြောင့်ပါ ။ လေသံကြားဖမ်းတရားနာတဲ့ သတင်းသမားတွေကြောင့် သတင်းကင်းလွတ်ခွင့် ၊ လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ဝ မရတာလို့ ဆင်ခြေပေးကောင်းဦးမလား မသိဘူး … ။
စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ကို တကယ်သာ အခိုင်မာဖြစ်စေချင်စိတ်ရှိလျှင် သတင်းကင်းလွတ်ခွင့် အပြည့်ဝရှိသင့်ပါတယ် … ။ မဟုတ်ကဟုတ်ကရေးသားဖော်ပြချက်မျိုးပါလာလျှင်တော့ လိုအပ်သလို အက်ရှင်ယူတာမျိုးပြန်လုပ်ပြီး ထိန်းသင့်ပါကြောင်း ……. ပိစိညှောက်တောက် ဦးနှောက်လေးနဲ့ ….. မတောက်တခေါက်နားလည်စွာဖြင့် မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ကြောင်ကြီးဆိုသော လူကြီးမင်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်သည်ဘယ်ဘက်မှနေသော လူမဟုတ်ပါ သတင်းသမာတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါသည် ကျွနုပ်တင်ပြထားသော်အထဲမှ ကလောင်သမားတချို့ကြောင့်
အမှန်တကယ်လုပ်နေသော ကျွနုပ်တို့အဖို့ အကြိုသက်ရောက်မူ့များရှိနေသဖြင့် ကျွနုပ်၏အတွေးယူဆချက်များကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှူပြီးအကျန်ပြုတဲ့အတွက်
(အထူးအထူး)ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆက်လက်၍ ကျွနုပ်၏ပို့များကို အကျန်ပြုဝေဖန်သုံးသနိုင်ပါတယ်—
ဟိတ်ယောင် လံဒန်…ကြောင်ကြီးကို နောက်စရာမဟုတ်ဘူး၊ လူကြီးမင်းကွ…. ပီပီသသ လေးလေးစားစားခေါ်။ မင်းတို့ သမဒဂျီးနဲ့ စစ်တပိုင်းအစိုးမရကို လဗျွတ်ပဲထင်တယ်လို့…။ ပြောစရာရှိ ပြောမှာပဲ၊ ဆဲစရာရှိ ဆဲမှာပဲ။ ငါ့ယောက္ခမလောင်း သဂျီးလည်း မကြောက်ဘူး…။ (သမီးဒေါ်ဂလေး မငိုနဲ့နော် တိတ်တိတ်…၊ ဦးကြောင်ကြီးက သမီးဒေါ်ဂလေး ဖခမည်းဒေါ်သဂျီးမင်းကို မိဘရင်းလို မှတ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာ။ ပါပါဂျီး…… ပါပါဂျီး…… ပါပါဂျီးကို ခြစ်တယ်။….)
ပုံစံ ကတော့ ၊
သတင်းထူး တစ်ခုထွက်လာ ။
မီဒီယာသမား အစစ်က သေချာအောင် မူရင်းကိုစုံစမ်း ၊
ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် သိုင်းဝိုင်း ၊
တရားဝင်အောင် ရဲစခန်း ၊ ရုံး တွေမှာ ထောက်ခံချက်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ၊
အဘ တို့ ရွာသူားတွေက ကြားတာနှင့် Internet ပေါ်တင်လိုက်ကြတော့ ၊
ဟို မီဒီယာသမား အစစ်က သတင်းကို ( စီးပွားဖြစ် ) တင်မယ်လည်းလုပ်ရော ၊
အဲဒီ သတင်းက သိုးနေပြီ ၊ ရောင်းမစွံတော့ဘူး ။